Posted by Tranquillus | Sep 14, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Si aad uga dhaadhiciso qof turjubaan ah ama dadweynaha fikrad, had iyo jeer waa lagama maarmaan in la dhex maro isgaadhsiinta hadalka, laakiin sidoo kale isgaadhsiinta dharka. Kuma guuleysan doontid haddii aadan haysan awooda xukunka ee lagaa rabo si aad ula qabsato dhagaystayaashaada. Sababtaas awgeed waxaad u baahan tahay inaad ku adkaysato awoodaada xukunka ee farshaxanka, dabeecad labaad. Sidee loo kobciyaa xooggaaga xukunka? Halkan ka baro sida loo sameeyo.
Maxay "macneheedu" macnaheedu yahay?
Marka loo eego qaamuusyada, "in la qanciyo waa in qof loo hoggaamiyo, sababaha ama caddaynta, in la aqoonsado wax run ah ama lagama maarmaan ah. ".
Waa inaad soo bandhigtaa fikradahaaga ama doodahaaga oo lagu taageerayo tusaalooyin ama caddayn. Fanka farshaxanka Xaqiiqdii, aad bay muhiim ugu tahay ganacsiga iyo nolosha ganacsiga, gaar ahaan marka laga wada xaajoodo heshiis labada dhinac ah.
Maxay u adagtahay in la qanciyo?
Uma baahnid inaad ka welwesho haddii bandhig kasta uu soo bandhigo mashruuc cusub, fikradahaaga marwalba waxay la kulmaan mucaaradka saaxibada qaarkood ama kuwa ka sarreeya. Waa maxay sababta? Sababtoo ah iska-caabbinta fikradaha cusubi waa farsamooyin maskaxeed. Sida ku-tallaalidda xubnaha, dhacdooyinka diidmada marwalba way muuqdaan. Tani waa sababta daawooyinka lagaga soo horjeedo daawooyinka diidmada si looga hortago in diidmada loo isticmaalo jirka.
Si looga gudbo ifafaalahan diidmada, sidaa darteed waa lagama maarmaan in laga fogaado qaladka ay dad badani galaan: kaas oo ah qancinta dadka kale adoo ku soo rogaya fikradahooda iyaga laga soo bilaabo bandhiggii ugu horreeyay. Runtii, soo bandhigid fudud ayaa lagu murmay cawaaqibka iyo saameynta togan ee ay abuuri karto ayaa ku filan soo bandhigista ugu horreysa. Marwalba waxaa jiri doonta dhacdo diidmo ah, laakiin wejigan waxaa gaabin doona dhowr toddobaad ugu badnaan.
Haddii fikradahaagu ay yihiin kuwo ku haboon, way adkaan doontaa kuwa doonaya in aan la xirin. Waa natiijada shaqada shakhsiyadeed ee dhexdhexaadiyahaaga oo si sahlan u aqbalaya soo jeedintaada kadib bandhigga labaad. Dawladuhu way fahmeen sababtoo ah waxay ku jirtaa macnaha guud ee ah in mashaariicda la wargeliyo saxaafadda ka hor intaan la ogaan. Dadku markaa waxay noqon doonaan kuwo aad u xiiso badan si ay u aqbalaan dib u habeynta.
Shan cilmi nafsiyeed oo ku saabsan farsamada kalsooni
Sida kalsoonida, qancinta waxay ujeedadeedu tahay in la helo mashruucaaga aad ku ansaxisay qofka aad wada hadlka u tahay ama qof dhagaystayaal ah. Si ka duwan sida wax-u-qabsiga oo laga yaabo in uu leeyahay dhammaadka caddaaladda, xukunka iyo ku qancitaanka waa in had iyo jeer ay noqotaa dhinaca dhabta ah. Waa kuwan fikradaha maskaxeed si loo helo xoog lagu kalsoonaan karo ama aaminaad.
Xoojinta fikradahaaga waa in la soo bandhigo xiriir kasta oo aad la leedahay dadka aad la wadaagto ama dadweynaha, ha noqoto dareen, dhaqan, anshax ...
Mabda 'ahaan, aragtidan waxay ka kooban tahay bixinta macluumaad buuxa, sax ah oo dhab ah oo ku saabsan mawduuca la soo bandhigay. Tani waxay caddaynaysaa in aad diyaarisay si fican oo aad soo bandhigto iyo inaad maadada maareysey iyo in khibraddaadu tahay mid khuseysa.
Naqshadani waxay ka kooban tahay fikraddaada si aad u xusuusiso guud ahaan dadweynaha. Waxaad si fudud u iibin kartaa caano adoo ka tagaya fasax carruurnimada ee rajooyinkaaga.
Waa mabda'a isku midka ah "si loola hadlo", laakiin miyir la'aanta. Haddii aad rabto in dhagaystayaashaagu ay u fiirsadaan fikraddaada ama soo jeedintaada, fiiri farriintooda iyo baahidooda.
READ Fariin email u dir si aad uga jawaabto codsiga macluumaadka kormeeraha
Waxaa la caddeeyay in wax badan oo naadir ah, waa mid soo jiidasho leh. Hadda waa inaad muujisaa faa'iido iyo karti-u-helideed si loo daboolo baahida ama loo xalliyo dhibaatooyinka qofka kaa waraysanaya.
Farsamada YES SET
Hadda oo aad si fiican u fahamto waxa ay tahay, halkan waa farsamo ah si fudud oo la xidhiidha shaashadda ballaadhinta hore loo soo bandhigay. HAA SET waxay ka kooban tahay su'aalo taxane ah oo jawaabahooda si macquul ah u noqon karaan "HAA". Ku-meel-gaadhsiiskan ku-ansixinta ayaa kuu diidaya wada-hadalkaaga ama dhagaystahaaga ruux wanaagsan. Tani waxaa la yiraahdaa qaboojinta.
Tani conditioning of mabda'a ah waa in la yidhaahdo "HAA" qof dhowr jeer, maxaa yeelay, waxay u badan tahay in ay sii wadi doonaan si ay u ansixiyaan sida aad soo jeedinta waa in line la su'aalaha aad hore weydiiyay.
Muhiimadda isgaarsiinta aan laheyn
Sida ay qabaan khubaradu, markaad soo bandhigto mashaariicdaada, si kasta oo ay fikradahaaga u khuseeyaan iyo doodaha aad soo jeediso, haddii loo akhriyo si xun, waxaad fursad yar u yeelan doontaa inaad ku qanciso wadahaaga ama dhageystayaashaada. Erayo ka fudud, weelka ayaa muhiim u ah sida waxyaabaha ku jira, maxaa yeelay wada xiriirku wuxuu ku saabsan yahay 80-90% hadal ahaan. Tan waxaa ka mid ah eegmada, ishaarooyinka, tamarta, neefsashada, masaafada, dhageysiga, u fiirsashada iyo iskaashiga. Marka maskaxda ku hay inaad kaliya qancin karto haddii aad ku qanciso waxa aad sheegayso.
Haysashada luuqad wanaagsan, hase yeeshee, micnaheedu maahan in ay tahay mid aan micno lahayn. Waxay ku saabsan tahay inaad geliso ficiladaada si waafaqsan erayadaada. Si taas loo gaaro, weydii dareenka aad ka rabto dhagaystayaashaada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in doorashadaadu ay ku habboon tahay xaaladda. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaadan ku qanacsaneyn haddii ay tahay inaad ku dhawaaqdo dhowr shaqo oo isdaba-joog ah.
Haddii awooda xukunku aanu kuu qabin, raac talooyinkan yar si aad u sameyso bandhiggaaga.
Qorshee qoraalada adoo diyaarinaya qaar xusuusin ah si ay kuu caawiyaan
Si taxadar leh u diyaari soo bandhigidaada si aad kalsooni badan u qabato naftaada,
hubso in yoolalkaagu si sahlan loo gaari karo oo aan hoos ugu dhicin dhul-galka,
dhoola-galin inta lagu jiro soo-bandhigiddaada, dhagaystayaashu si wacan ayay u qaban doonaan oo waxay noqon doonaan kuwo aad u xiiseynaya inay ku dhagaystaan. Ku tababaro muraayada horteeda,
Haddii aad tahay ee aad bandhigga koowaad, labaad ama kuwa ku xiga, hubi in ay sameeyaan dabagal natiijada iyo horumar ee awoodda xukunka. Sidaas daraaddeed awoodaan in ay thinking xirfadahaaga iyo khibrad si ay wax ka wanaagsan oo si fudud ku qanciyo aad dhagaystayaasha aad u noqon doonaa, wax kasta oo aad qabto mashruuca.
Sidee loo kobciyaa mid ka mid ah awooda xukunka? Nofeembar 25th, 2018Tranquillus
horeSidee loo dhegeystaa si waxtar leh?